Iindebe zePhepha, iZiciko zeNdebe yePhepha, iibhokisi zesidlo sasemini, Izikhongozeli zokutya-iLenkin
IPHEPHA LOKUPHAWULA NESIPHUMO
Indebe yePhepha eliSela ngokuBandayo
Indebe yePhepha leDonga eliphindwe kabini
Ukuphatha iNdebe yePhepha
Indebe yePhepha yeCream Cream
IKraft yePhepha leNdebe
Isiciko seNdebe yePhepha
I-Ripple Wall yeNdebe yePhepha
ISIqulatho SOKUTYA KWEPHEPHA
I-SUGARCANE BAGASSE TABLEWARE
Umzi-mveliso ngokuthe ngqo, Yamkela iiYilo eziCwangcisiweyo
Umgangatho olungileyo, amaxabiso afanelekileyo kunye nexesha lokuhanjiswa okukhawulezileyo
Iseti epheleleyo yeeLayini eziPhezulu zoKwenza kweMatshini
Iisampulu zasimahla zinikezelwe
izisombululo zokupakisha ukutya
INDEBE YEPHEPHA ELAHLEKILEYO
1. Kushushu kuyabanda kuyasebenziseka
2. Ukhuselo lokusingqongileyo oluhlaza
3. Amanqanaba okutya angenisa impahla eluhlaza
Izinto zePati Amacwecwe ePhepha
Iphepha elithandwayo elilahliweyo leNapkins
Intengiso eshushu yeNdebe yePhepha leSuphu
Iphepha le-Straws elinombala elinobuhlobo
okwakhiwa ngephepha ibhegi lehoseyile
ripple iikomityi iphepha eludongeni ezineziciko
Yasekwa ngonyaka ka-2005, ibekwe eAnhui Anqing, Anhui Lenkin Packaging Co., Ltd yenye yezona zinto zinkulu ezivelisa iimveliso zokupakisha iphepha eTshayina, ezinje ngeekomityi zephepha, ezineziciko zephepha, iibhokisi zasemini, izikhongozeli zokutya njlnjl. Ixesha lexesha, inkampani yethu ikhule yaba yenye yeenkxalabo eziphambili kule ndawo ngenxa yedumela lokubonelela ngeemveliso ezisemgangathweni kunye nolwakhiwo lwamaxabiso afanelekileyo kunye neenkonzo ezibalaseleyo.
Ukunqongophala kwe China kwezikhongozeli ezingenanto kuncitshisiwe
Isikhokelo: Kuyaqondakala ukuba kwi-2020, ukuhanjiswa kwempahla kuzwelonke kuya kuba ziitoni ezili-14.55 zeebhiliyoni, kunye nokufakwa kwesikhongozeli sezibuko kuya kuba zizigidi ezingama-260 ze-TEU. Zombini izibuko lokuhamba kunye nokuhamba kwesitya kuya kuba kwindawo yokuqala emhlabeni. “Abavelisi beekhonteyina belizwe lam ...
Yitya Impilo! Kwaye noShishino lokutya kufuneka lube seMpilweni!
Kutshanje, i-Ofisi kaMasipala wezoRhwebo ikhuphe "Isaziso sokwenza uMsebenzi oLungileyo kwiShishini lokuTya ngo-2021" (apha ekuthiwa yi "Isaziso"), esacacisa umgaqo-nkqubo wesixeko sethu ukukhuthaza nokukhuthaza uphuhliso Icandelo lokutya ...
"UkuNcitshiswa kwePlastiki kunye nokuNcitshiswa kwePlastiki" Qala kuthi
Kule mihla, ubungozi benkunkuma yeplastiki ekunzima ukuyithoba baziwa ngokubanzi, kwaye ukuthintelwa kweplastikhi kuyakhuthazwa ngokuthe ngcembe kwihlabathi liphela. Kodwa kubomi bokwenyani, ukuphunyezwa akonelisi. Amashishini amaninzi asayikhathaleli imveliso yenkunkuma yeplastiki yenzuzo ...
Ixesha lokuthetha iNyaniso: Nokuba usebenzisa iikomityi zephepha ezilahlwayo zinokubangela umhlaza?
Okokuqala, masiqale ngezinto zekomityi yephepha. Ezona ndebe zephepha zilahlwayo zisetyenziswa kakhulu "ziikomityi zephepha zeplastiki". Ngaphandle kwekomityi yephepha ngumaleko wephepha eliqhelekileyo lokutya kwaye ngaphakathi ngumaleko wephepha eligutyungelweyo. Izinto zeembumba zihambelana. Nangona kuza ...
Iplastikhi, ngomthi, uqalo, iphepha, isiseko se-bio, iPLA
Ngokweemfuno zabathengi kunye neemveliso, iinkonzo ze-ODM / ze-OEM kubathengi kwihlabathi liphela
Uqinisekiso lomgangatho weMveliso, kunye nelayisensi yemveliso, ukubonelela ngenkonzo efanelekileyo emva kokuthengisa
Iqela leenkonzo zobungcali kunye neqela lobuchwephesha lobuchwephesha